Jao 15 :1-8
Hampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin’ny fahalalana tsara an’Andriamanitra sy Jesoa Tompontsika.
Ny Jaona 15 :1-8 no handraisantsika ny hafatr’Andriamanitra anio.
Inona no ampianarin’Andriamanitra antsika avy amin’izao Soratra Masina izao?
1- EKEO HO FOTOTRY NY FIAINANAA I JESOA (and 1-3)
Amin’ny fiandohan’ity Filazantsara ity, dia efa ambaran’i Jesoa fa i Jesoa “no nahariana ny zavatra rehetra; ary raha tsy Izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra izao na dia iray aza”. Ary amin’ity Filazantsara araka Jaona ity dia ahitantsika ny fanambarantenan’i Jesoa maro indrindra, izay maneho ny maha-Andriamanitra azo itokiana Azy. Ao amin’ny Testamenta Taloha, ny voaloboka dia ilazana ny Israely, nefa hita fa toa voaloboka simba sy tsy mamokatra izy ireo. Eto i Jesoa no manambara ny tenany ho Ilay “tena voloboka”. Izy no voaloboka mamokatra, ary tsy sampany fa tena fototra tokoa. Afaka mamoa ho azy Izy, nanangana ny maty Izy ... Tena azo ianteherana tokoa Izy. Tsy misy tahaka Azy na aiza na aiza, na iza na iza. Izy no Andriamnitra tokana, izay tokony handohalehan’ny lohalika rehetra, koa “tiava an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra” (Deo 6:5).
Ry havana malala, mahatsiaro ny maha-fototry ny finoantsika an’i Jesoa Kristy isika. Kristiana isika, mpanaradia an’i Jesoa isika, aoka tsy hihevitra Tompo hafa, fa hanaiky Azy mandrakariva amin’ny fiainantsika monontolo. Aza miantehitra amin’ny vola, aza mandeha mila vonjy amin’ny mpimasy, fa ankino Aminy kosa ny fiainanao rehetra, apetraho Aminy ny momba ano rehetra, fa Izy no hanome hery ho anao, hampamoa anao amin’ny zavatra rehetra ataonao Izy. Ekeo ho fototry ny fiainanao Izy.
2- MANANA FIRAISANA AMIN’ILAY FOTOTRY NY FIAINANAO (and 4-8)
Mamaramparana ny fanambarany ny tenany amin’ny mpianany i Jesoa eto. Ohariny amin’ny voaloboka ny tenany, ary sampana kosa ny mpianatra na ny mpiara-dia Azy. Ambaran’i Jesoa fa ny firaisana Aminy ihany no mampamoa ny sampana. Raha miresaka sampana isika dia hisy karazany roa ny sampana miray amin’ny fototra: ny voalohany dia sampana maina, toa miray amin’ny fototra izy, nefa efa tsy mandray tsiro mampamoa azy avy amin’ny fototra intsony, ka tsy mamoa izy; ny faharoa kosa dia sampana dia sampana mahazo aina tsara, maintso tsara, satria mbola mandray tsiro avy amin’ny fototra. Ilay voalohany teo dia ireo mihaino sy mandre nefa tsy mino, tahaka ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna izay efa mafy hatoka sy mafy fo. Ireny ilay lazain’i Jesoa hoe: “handre mandrakariva fa tsy hahafantatra, hijery mandrakariva fa tsy hahita”. Ilay faharoa kosa dia ireo mandre ka mankatoa ny Tenin’Andriamanitra Ny sampana moa eto dia ilazana ny Kristiana tsirairay avy
Moa tsy misy tahaka izany koa va ny kristiana ankehitriny. Milaza ny tenany hoe kristiana, miaraka amin’i Kristy ny sasany, nefa tsy mankato izay lazainy, tsy manao ny sitrapon’Andriamanitra, tsy mamoa, tena tsy misy ilana azy. Tandremo sao tahaka izany ianao. Tsarovy fa izany no ilay ambaran’i Jesoa fa “esory” sy “ariana any ivelany” ka “atsipy ao anaty afo, dia ho may” Mananà firaisana amin’ny fototra ianao, dia i Jesoa Kristy Mpamonjy antsika izany.
Eto am-pamaranana ary, mampianatra antsika i Jesoa Kristy fa Izy irery ihany no fototry ny finoantsika, ka miantso antsika mba hanaiky Azy, mitaona antsika mba hananantsika firaisana amin’ny Tompo fototry ny finoantsika, fa Izy no Mpahary antsika Tsy ho sampana maina na maty anie isika fa sampna amiray amin’ny Tompo tokoa. Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. AMEN!